November 26, 2020 - Padaethar
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ စကားပြောတတ်အောင် မယားငယ်သံနဲ့ ဒီလိုလေ့ကျင့်စေချင်တယ်….
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးကတည်းက မယားငယ်သံနဲ့ စကားပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်စေချင်တယ်။ “ကိုကို အဟင့်အဟင့်” “ဒါလေးဝယ်လိုက်မယ်နော် ကို” “မီးလှလားဟင်” “ဒီလိုဝတ်မယ်နော် ဘာမှ မပြောနဲ့” “ဟင်းမချက်တတ်ပါဘူးဆို ……. ” “ကိုကို ထမင်းခူးပေး” “အာဘွား” စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ ရခါစဆိုတော့ သူတို့ကလည်း အဲ့ဒီလို ပြောဆိုနေတာကို ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတာပဲ။ နောက် တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လည်း အေးဆေးပဲ။ ကြည်နူးပီတိတော့ မဟုတ်တော့ပေမဲ့ ပျော်စရာကြီး ပဲပေါ့လေ။ သုံးလေးနှစ်ကြာတော့ ဒီအသံ ဒီဟန်တွေကို နည်းနည်း စိတ်ညစ်ပေမဲ့ အကျင့်ပါနေတော့ …. “မီးလှလားဟင်” ဆိုလည်း ပြန်မကြည့်ပဲ “လှတယ်” တွေဘာတွေ ဖောရှော လုပ်ပေးတာပေါ့။ ၅နှစ် ၆နှစ်လောက်လည်း ကြာရော အာဘွားဆို …. ပြီးပြီးရောပဲ။ ၇ နှစ် … Read more
မိန်းကလေး တွေ ချစ်မိတဲ့အခါ ပြုမူကြတဲ့အရာ (၅) ခု
မိန်းကလေး တွေ ချစ်မိတဲ့အခါ ပြုမူကြတဲ့အရာ (၅) ခု အပြစ်မမြင်ဘဲ နားလည်ပေးပါနော်….. အချစ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရခက်တဲ့ ခံစားချက်ကြီးဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသား မှာ အမြစ်တွယ်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ မိန်းကလေး မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အလိုလိုဖြစ်လာတော့တာပဲ။ ပိုလှချင်လာတယ်၊ ပျော်ရွှင်မြူးတူးလာတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း တွေးတတ်လာတယ်။ အမူအရာ တွေကလည်း ပြောင်းလဲလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်သူ နဲ့တွေ့ရင် ကလေးဆန်သွားတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒါတွေလုပ်တတ်လာကြတယ်။ ၁။ အနား ကို အရမ်းကပ်တယ်။ တူတူထိုင်နေရင်တောင်မှ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေချင်တယ်။ ချစ်သူရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့က ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလည်း ပြောဦးမယ်။ အဲ့ဒီ အနံ့ လေးကိုပဲ သဘောကျနေမိတာ။ ၂။ ကုတင်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး အနားနားကပ်အိပ်ရမှ ကျေနပ်တာမျိုး။ ချစ်သူ ရဲ့ဘေးမှာ နီးနီးကပ်ကပ်အိပ်ရင် … Read more
လက်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူသယောင် ရှိပေမယ့် သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွဲပြားပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ လက်မမှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်း၊ အရစ်ကြောင်းလေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော်ပြပေးနိုင်တာကြောင့် ဖတ်ကြည့်ဦးနော်… ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြာင်းလေးဟာ (A) ပုံစံအတိုင်း လက်မရဲ့ ပထမအရစ်အရှည်က ဒုတိယအရစ်ထက် ပိုရှည်တယ်ဆိုရင် ….. သစ္စာတရား ကို လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်ပြီး လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွဲဖော်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကို ချစ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေး ရဲ့ လက်မ မှာရှိတဲ့ အရစ်အကြောင်းလေးဟာ (B) အတိုင်း လက်မရဲ့ပထမအရစ်နဲ့ ဒုတိယအရစ်ဟာ အရှည်တူတူပဲဆိုရင်တော့ …. တည်ငြိမ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းထားတဲ့ … Read more
ပထမဆုံး အတွေ့ ကြုံမှာ ချစ်သူလေးကို ဘယ်လိုနမ်းမလဲ….?
ပထမဆုံး အတွေ့ ကြုံမှာ ချစ်သူလေးကို ဘယ်လိုနမ်းမလဲ? အဆင့်(1) – နေရာ နဲ့ အချိန် က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား စကားအေးဆေးပြောလို့ ရမယ့် ပန်းခြံလိုနေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။ ချစ်သူ က စိတ်လက်ကြည်သာနေချိန်ဖြစ်ပါစေ။ အဆင့်(2) – သူ့ ရဲ့ အလှအပ နဲ့ အပြုမူတွေအပေါ်ချီးမွမ်းမူလေးတွေလုပ်ပါ။ ဒီနေ့ ဝတ်လာတာ အရမ်းလိုက်တယ်၊ ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ပေါ့။ သင်တို့ နှစ်ဦးရဲ့ စကားပွဲ ဟာ ကြည်နူးစရာလေးဖြစ်ပါစေ။ အဆင့်(3) – အနားကိုကပ်သွားပြီး လက်ကလေးကိုင်ကာ ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းထားလိုက်ပါ။ သူအလိုက်သင့်လေးပါလာရင် သင့်အတွက်ရာသီဥတု သာယာဖို့ များနေပါပြီ။ အဆင့်(4) – စကားလေးတွေပြောနေရင်း နဖူးလေး(သို့ ) ဆံပင်လေးတွေကို ဖွဖွလေး နမ်းပေးလိုက်ပါ။ သူ့ လက်မောင်းသားလေးတွေကို … Read more
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး ခြေလှမ်းတွေ ပျက်နေတယ်လို့ ခံစားမိနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ ထင်နေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး သင်အနေနဲ့ သူ့ Facebook ကိုပဲ ၀င်ကြည့်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘာများထူးခြားတာ တွေ့ပါသလဲ။ ဘာရယ်မဟုတ် တခြားကောင်မလေးတွေရဲ့ပို့စ်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူ Like လုပ်ထားတာ၊ ကွန်မန့်ဝင်ပေးထားတာမြင်ရင် သံသယတွေက ပိုကြီးတော့မှာပေါ့။ ဒီတော့ ဒီနည်းတွေထက် သင့်ကိုအဆင်ပြေသွားစေနိုင်သလို၊ နှစ်ဦးသားပြန်အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ သင့်စိတ်ကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီ (၇)ချက်အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ပါတော့။ ၁။အခင်မင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းကို ခေါ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းတွေဖွင့်ဟဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ခုချိန်မှာ သင့်ချစ်သူက နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာလား၊ သေချာရဲ့လား မသိရသေးခင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီအကြောင်းတွေ ပြောနေဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် … Read more
26.11.2020 မှ 2.12.2020 အထိတစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
26.11.2020 မှ 2.12.2020 အထိတဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး တနင်ျဂနှေ ဒီကာလအတှငျး လကျလှနျထားတဲ့ ငှတှေပွေနျရလိမျ့မယျ။ စပျတူအလုပျမြား၊ ရှယျယာအလုပျမြား တိုးတတျလာဖှယျရှိနတေတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေး ကတော့အားနညျးညံ့ဖငျြးပါတယျ။ မိနျးကလေးမြား ဓမ်မတာနဲ့ပတျသကျ သော ရောဂါတှဖွေဈလှယျပါတယျ။ ရခြေိုး မှာပွီးခြှေးငုပျ၊သှေးငုပျဖွဈရတတျပါတယျ။ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုတှေ တိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ မိမိရငျဆိုငျနိုငျပါ့မလားလို့ သံသယဖွဈနေ တဲ့ကိစ်စတဈခုကိုအောငျမွငျစှာ ရငျဆိုငျကြျော ဖွတျသှားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အလုပျထဲမှာလဲ တာဝနျကွီးလေ၊အောငျမွငျ မှုကွီးလပေါပဲ။ တဈပါးသူ တှဆေီကအကူ အညီ ကောငျး၊ အကွံဉာဏျကောငျးတှအေလှနျပဲရရှိပါလိမျ့မယျ။ မထငျမှတျဘဲ မိဘ၊ညီအကိုမောငျနှမတှနေဲ့ စိတျဝမျးကှဲရတတျပါတယျ။ ရပျဝေးခရီးမြားခရီးရှညျမြားလဲစတငျထှကျခှာမယျဆိုအဆငျပွမေဲ့ကာလပါပဲ။ အနုပညာ အလုပျမြား၊ အသံနှငျ့ရငျးနှီးရသော အလုပျမြား၊ လုံခွုံရေးကိုမွှငျ့တငျတဲ့အလုပျမြားအဆငျပွတေိုးတတျလာနိုငျတာ ကိုတှရေ့ပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ သံသယစိတျတှကေ ခဈြသူနှဈဦးကွားကွီးထှား လာနိုငျပါတယျ။ သခြော ရှငျးပွ ဖို့လို ပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျရေးနဲ့ပတျသကျပွီးနားလညျမှုတှေ၊ဖေးမမှုတှရှေိပါလိမျ့ … Read more
“ပံ့သကူပစ်ပါသည်” ဆိုတဲ့ စာလေး ကပ်ထားပေးနော် …
ကဲ… ပံ့သကူ ပစ်ကြရအောင် ပံ့သကူပစ်ပါ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာပံ့သကူပစ်ပါ။ကိုယ်ပြန်ရမယ့် စီးပွား လာဘ်လာဘ ကိုမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်စေတနာ သန့်ရှင်းစွာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ အစစအရာရာ ကြပ်တည်းလာတဲ့ ခေတ်မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ ရတဲ့ သူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ငွေပမာဏ နဲသည် ဖြစ်စေ ၊ များသည်ဖြစ်စေ ပစ္စည်း နဲသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးကို စေတနာ များစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ကြပ်တည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့် ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင် ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက အခုချက်ခြင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ သူခိုးကြီးညမှာ စနောက်ပြီး ကျီးမနိုးပွဲလုပ်ကြသလို။ ပံ့သကူပစ်ပွဲ အစဉ်အလာလေးလဲ ဆက်ထိန်းသိမ်းကြပါစို့နော်။ ငွေ ၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဆန်အိတ် သေးသေးလေးဖြစ်စေ … Read more